merolagani - सनराइज बैंकले कतिमा किन्ने भयो एन.आई.डि.सि.क्यापिटल मार्केट्स ?
सनराइज बैंकले कतिमा किन्ने भयो एन.आई.डि.सि.क्यापिटल मार्केट्स ?
Jan 09, 2017 merolagani
सनराइज बैंक लिमिटेडले एनआईडीसी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई किन्ने प्रस्ताव विशेष साधारणसभाबाट पारित गराएको छ । केही महिनाअघि नारायणी नेशनल फाईनान्सलाई आफुमा मिलाएको सनराईजले सामुहिक लगानी कोष र धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न सहज हुने गरी एनआईडीसीलाई किन्ने सम्झौता गरेको थियो ।
पौष २५ गते बोलाइएको बैंकको विशेष साधारण सभाबाट एन.आई.डि.सि.क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई प्राप्ती (एक्विजिशन) गर्ने सम्बन्धी संचालक समितिको विशेष प्रस्ताव पारित गराएको हो । सनराईज बैंकले एन.आई.डि.सि.क्यापिटल मार्केटको प्रतिसय कित्ता बराबर सनराइज बैंकको ६५ कित्ता सेयर हुनेगरी खरिद गर्न लागेको हो ।
विशेष साधारण सभाबाट प्राप्ती (एक्विजिशन) प्रस्ताव पारित भईसकेकोले अन्तिम स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा संयुक्त निवेदन पेश गर्ने बैंकले बताएको छ ।
एनआईडीसी क्यापिटल मार्केट्सले प्रारम्भ देखि एनसीएम. मर्चेण्ट बैंकिंग लि. स्थापना गरी सफलतापूर्वक मर्चेण्ट बैंकिंग कारोवार गर्दै आएकोे छ । एनसीएम मर्चेण्ट बैंकिंग नेपालमा पहिलो पल्ट म्युचुअल फण्ड संचालन गर्ने संस्था हो ।
यस प्राप्ति पश्चात बैंकको पहुच तथा ब्यबसाय क्षमतामा ब्यापक बढोत्तरी हुनुका साथै मेचेण्ट बैंकिंगमा समेत सनराइज बैंकको उपस्थिति हुने आशा गरिएको छ ।
गत आर्थिक बर्षको मुनाफबाट ३३.३३ प्रतिशत वोनस वितरण गरेको बैंकको चुक्ता पुंजी झण्डै ५ अर्व
३० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । एनआईडीसी. क्यापिटल मार्केट्स प्राप्ति पछि चुक्ता पुंजी ५ अर्व ४५ करोड नाघ्नेछ ।